Ma jaaliyadaha mise qabyaaladaha soomaalida? | Somaliska
Dalka Iswiidhan waxaa urur ama Jaaliyad sameysan kara 3 qof oo kaliya iyo wixii ka badan, arintaan ayaa dhalisay in ururo badan oo Soomaaliyeed ay ka curtaan halkaan, waloow aysan xumayn in urur ama jaaliyad la sameysto hadana waxaa ceeb ah sida bulshada soomaaliyeed intay ka faaideysan la haayeen fursadaan ay u isticmaalaan in ay isku kala qeybiyaan oo qabyaaladii iyo danihii gaarka ahaa ee wadankeena burburiyay ay halkaan ka sii wadaan. Waxaad arkeysaa goob lagu sheegayo jaaliyad Soomaaliyeed balse markii aad gashid si isku mida laguu fiiranayo haddii wajigaaga cusub yahay, ama aadan ka dhalan cida jaaliyadaas u furan tahay. macnaheedu waxa ay tahay in jaaliyada ay tahay goobta qabiilka. Ayadoo laga yaabo shaqsiyaadka furta goobaha jaaliyadaha in ay ku dhalisay dano dhakhaale ayaa hadana taas waxay abuurtay in ay bulshadu isku qaybiyaan oo midba midka kale ku eedeeyo in aan cidiisa lagu matalin gudoonka jaaliyada. Is qabqabsiga iyo is eedaynta bulshada soomaaliyeed ayaa meel kasta ka muuqata, xitaa tuulooyinka ugu yar oo laga yaabo 100 qof in ay ku nool yihiin ayay isku dayayaan in ay dhowr urur sameystaan halkay mid uun ku midoobi lahaayeen wax kalena ma ahan ee waa dano qabiil ama mid shaqsiyeed waxaana abuuraya qabyaalada. Inkaarta haysta bulshada Soomaaliyeed waa mid ka soo maaxaneysa dhibaata loo geystay dalkeenii hooyo, xalka iyo midnimada bulshada soomaaliyeed ee khurbaha ku nool ma imaanaayo ilaa wadankeenu uu hagaago. Boggan Somaliska siyaasada Soomaaliya waxba kama qoro waayo waxaan qilaaf iyo is qabqabsi ahayn noo siyaadin meyso, balse arintaan aan hada ka dhawaajinay waa mid bulshada Soomaaliyeed ee Iswiidhan ka dhex taagan oo nawada taabaneysa. Ilaahey waxaan uga baryaynaa in uu midnimo nasiiyo. Jimcale
Boggan Somaliska siyaasada Soomaaliya waxba kama qoro waayo waxaan qilaaf iyo is qabqabsi ahayn noo siyaadin meyso, balse arintaan aan hada ka dhawaajinay waa mid bulshada Soomaaliyeed ee Iswiidhan ka dhex taagan oo nawada taabaneysa. Ilaahey waxaan uga baryaynaa in uu midnimo nasiiyo.
June 19, 2010 at 14:03
amiin ayaan leeyahay